‘पार्टीले ठाडो अन्याय गर्दा झोक चलेको छ’ :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
‘पार्टीले ठाडो अन्याय गर्दा झोक चलेको छ’
सरल सहयात्री- अध्यक्ष. जनसाँस्कृति महासंघ नेपाल
सरल सहयात्री, जसले जीवनको सबैभन्दा उर्जाशील समय देश र जनताको मुक्तिका खातिर युद्धमैदानमा बिताए । अनेक उल्झनसँगै आरोह/अवरोहकाबीच उनको संघर्षमय राजनीतिक जीवनयात्रा अघि बढ्यो ।
२०४८ सालमा सिन्धुपाल्चोकको मानेश्वाँरामा गठित बाल संगठनमा संगठित भएर राजनीतिक जीवन सुरु गरेका उनी २०४९ सालमा तत्काल अखिल छैठौंको जिल्ला सदस्य भए । २०५५ सालमा अखिल क्रान्तिकारीमा आवद्ध भएपछि उनी तत्कालिन माओवादीद्वारा सञ्चालित जनयुद्धमा होमिए । २०५७ सालमा जनमुक्ति सेनाको सिपाहीहुँदै उनले राजनैतिक कमिसार र ब्रिगेड कमाण्डरसम्मको जिम्मेवारी कुशलापूर्वक सम्हाले ।
जनयुद्धका क्रममा भएका विभिन्न दोहोरो भीडन्तमा परी उनी चारपटक गम्भीरभन्दा गम्भीर घाइते भए । जनयुद्धकै क्रममा उनले आफ्ना दाजु शम्भु पौडेल र बहिनी रिता पौडेललाई गुमाउनुपर्यो । तत्काली शाही सेनाले घरमा अन्धाधुन्ध गोलीबारुद बर्साउँदा भाउजू गम्भीर घाइते भइन् । यसरी अतिविषम परिस्थितिका बीच राजनीतिक आन्दोलनमा निरन्तर सक्रिय सरल सहयात्री २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवार भए ।
तर, उनी त्यतिबेला थोरैमतान्तरले पराजित हुन पुगे । अहिले उनी जनसाँस्कृति महासंघ नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । स्पष्टवक्ता र युवामा उर्जा भर्न माहिर उनी अहिले पनि भूगोलको राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय छन् । राजनीतिक परिवर्तनकै लागि आफ्नो निजी जीवन समर्पण गरेर लागिपरेका युवा नेता सरल सहयात्रीसँगको संक्षिप्त कुराकानीः
एमाले–माओवादी एकताबारे तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
म त लामो समय लालसेनाको रुपमा आफ्नो राजनैतिक संघर्ष गुजारेको व्यक्ति हुँ । म मारामारको युद्धमा सहभागी भएँ । सम्भवतः मेरो कारणले मैले चिन्दै नचिनेका तत्कालिन सरकारका सिपाहीहरूको रगत बग्यो होला र उनीहरूले नचिनेको मैले पनि झण्डै आधा दर्जन पटक बमको छर्रा र गोलीका पर्राले छेडिनु पर्यो ।
एमाले–माओवादीको कटाक्ष भने पनि बहस भनेपनि हाम्रो व्यक्तिगत अंशवण्डाको लागि थिएन । तत्कालिन एमालेलाईमाओवादीको बाटो ठीक लागेको थिएन होला र माओवादीलाई एमालेको बाटो ठीक लागेको थिएन । आफ्नो सिद्धान्त र उद्देश्यलाई पुष्टी गर्न भएको विवादहरु थिए ति सबै । आज हामी एउटै नदीमा समाहित भइसकेका छौं त त्यो कसरी फरक हुन सक्छ ? अलिक दूरीसम्म दुई नदी मिसिएपनि फरक जस्ता देखिन सक्ला र दुई किनारा समातेर बग्न सक्ला तर अन्ततः एकै नदी बनेर बग्नुमा नदीलाई पनि समस्या हुँदैन । हामीलाई पनि ।
एमाले–माओवादी एकताविचारको नभई सत्ता स्वार्थको कारण मात्रै भएको भनेर टिप्पणी पनि हुने गरेको छ नि !
आंशिक सत्य के छ भने आजकै कुरा गर्ने हो भने दुइ ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरुआफ्नो राजनैतिक मार्गमा सफल देखिएका हुन् । तर माक्र्सवादले घोषणा गरेका सैद्धान्तिक मार्गमा चाहिं छन् कि छैनन् भनेर शंका गर्न सकिने धेरै ठूला ठाउँहरु संगै छ । यद्यपि आज नेकपाको मार्ग उद्देश्यको आधा बाटोमा यात्रारत छ । यो पनि स्पष्ट छ कि, यात्रा उद्देश्यको दिशातिर नै लम्केको छ । आजै हामी निक्र्योल गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनौं कि, यो वैज्ञानिक समाजवादको मार्गमा पुग्छ कि पुग्दैन भनेर । हामी सबै मिलेर कोशिस गर्नुपर्छ, यो पार्टीलाई वैज्ञानिक समाजवादको मार्गमा पुर्याउनको लागि । तर चिन्ताजनक विषय सिद्धान्तको छैन । हामीसँग विकास भइरहेको गैरकम्युनिष्ट चरित्रको छ । चिन्तनशैलीको छ ।
हिजो लडाईंको मोर्चा सम्हाल्दाको सपना त यस्तो थिएन होला है ?
धोका त नभनौं । आज जुन खालको राजनैतिक परिवर्तन भएको छ, जनताले यसअघि प्राप्त नगरेको संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् । त्यसको जग भनेकै जनयुद्धको बल र जनआन्दोलनको तुफान थियो । जनयुद्ध नभएको भए जनआन्दोलन सम्भव थिएन । जनआन्दोलन नभएको भए जनयुद्धले आफ्नो लक्ष्यपूरा गथ्र्यो वा गर्दैन थियो, अनुमानित इतिहासको बहस हो ।
त्यसकारण धोका भन्ने शब्दको म प्रयोग गर्न चाहन्नँ । तर समग्र आचरण व्यवहार, विधि, पद्धति, आन्तरिक जनवाद, संगठनात्मक सिद्धान्त तथा प्रयोगको दृष्टिबाट हेर्दा चाहिं ‘ती नेताहरु झुठ बोल्नेहरु हुन्’ भन्छु । हिजोका लोकप्रिय नेता आजको समग्र चरित्रले तह अनुसारका सामन्तको रुप धारण गरेका छन् । इतिहासमा गरेको लगानीबाट सुदूर भविष्यसम्म बयाजको स्याज खाएर बस्ने काम सामन्त र सुदखोरले मात्र गर्न सक्छ, एक कम्युनिष्टले होइन ।
दुइ ठूला पार्टीबीच एकता हुँदा नेता व्यवस्थापन चुनौतिको कुरा थियो होला । तर हिजो आफूभन्दा कम ओहोदामा भएकाहरु माथि पुगेर आफू यथास्थानमा नै बस्नु पर्दा कस्तो अनुभुति हुँदो रहेछ ?
ठाडै अपमान गर्नेगरी कार्य विभाजन हुँदा र व्यक्तिगत रुपले अन्याय हुँदा कसलाई मज्जा लाग्छ र ? आफ्नो समकालिन मित्र माथि गयो भनेर होईन, आफूमाथि अन्याय भयो भनेर ‘झोक’ चल्छ । मैले ‘झोक’ शब्द यसकारणप्रयोग गरेँ कि, यसमा संघर्ष मिसिएको छ । हो, मलाई दुख लागेको छैन तर नराम्ररि झोक चलेको छ । आफूमाथि ठाडा– ठाडो अन्याय हँुदा समेत झोक नचल्ने मान्छेले केही पनि गरिखाँदैन । मेरो व्यक्तिगत हैसियतको लागि मैले सम्हालेको कुनैपनि संगठनको हवाला दिन चाहदिनँ ।
तर म चुनौति दिएर भन्न चाहन्छु, मेरो समकालीन साथीहरुको तुलनामा कुनै नेताको छोरा, भतिजो, भाई, भान्जा, ज्वाईं, साला, भेना वा केही नभएपनि उहीं थरको वा एउटै गाउँको हुनुपर्ने मूल्यांकन बाहेक कुनैपनि मूल्यांकनधारी व्यक्तिले मेरो सक्रियता, प्रतिवद्धता, प्रतिस्पर्धा वा वैचारिक स्पष्टता र अन्य आवश्यक पर्ने तर्कबाट एक पोइन्ट मात्रै माइनस गर्ने हिम्मत राखोस्, म त्यो व्यक्ति सामू माफि माग्न तयार छु ।
अब राजनैतिक यात्रालाई कसरी अघि बढाउने वा कुन भूमिकामा रहेर काम गर्ने सोच्नु भएको छ ?
हिजो सर्वहारा वर्गको नेतृत्वको लागि लड्नुभयो । आज आफ्नो समृद्धिको लागि मात्रै ध्यान दिनुभयो भन्ने आरोप छ नि !